Fitoriana nataon’i Tabera Randriamanantsoa: notsipahin’ny HCC ny paika maloto hanemorana fifidianana | NewsMada
Fitoriana nataon’i Tabera Randriamanantsoa: notsipahin’ny HCC ny paika maloto hanemorana fifidianana
Miketrika tetika maloto miaraka amin’i Deba ireo mpanao politika sy kandidà sasany nitory eny amin’ny fitsarana. “Tsy mitombina araka ny lalàna fa filam-baniny fotsiny ny fitoriana nataon’i Tabera Randriamanantsoa momba ny fanaikana ny mpifidy”, hoy ny mpahay lalàna, Ranesa Firiana. Notsiahiviny fa 48 ora aorian’ny fampahafantarana ny didim-panjakana na 48 ora aorian’ny nivoahan’izany didim-panjakana izany amin’ny gazetim-panjakana, araka ny fe-potoana noferan’ny lalàna ny fahazoana mametraka fitoriana momba izany. Mitaky ny hampiatoana izany didy izany ity kandidà ity, araka ny fitoriana napetrany eny amin’ny filankevim-panjakana. Nivoaka ny 29 jona teo, io didy io, ary ny 10 jolay kosa ny nivoahany tamin’ny gazetim-panjakana. Izany hoe, tokony ho ny 1 jolay (48ora) na ny 12 jolay (48 ora) ny tokony hangatahana ny fampiatoana izany. Tsy nisy anefa ny fitoriana momba izany ary nirotsaka avokoa nametraka ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiny avokoa ireo kandidà rehetra.
Miray tendro amin’i Deba amin’ny tsy hanaovana fifidianana
Midika izany fa tsy mandeha ho azy izao fitoriana nataon’i Tabera Randriamanantsoa izao fa miray tendro amin’ny hevitra voizin’ny amiraly Ratsiraka ny hanemorana ny fifidianana. Tafiditra amin’ny paikady maloto avokoa ny tsy hanaovana izany, araka ny voatondron’ny lalàmpanorenana sy hidiran’ny firenena any amin’ny tany tsy tan-dalàna ny azy rehetra ireo.
Tsiahivina fa nahemotra ho amin’ny 11 septambra indray ny fandinihan’ny filankevim-panjakana ny fitorian’i Tabera Randriamanantsoa sy Ralaiseheno Guy Maxime momba io datim-pifidianana io.
Mazava ny voalazan’ny HCC
Anisan’ny nanakiana mafy ny momba io datim-pifidianana 7 novambra io koa ny kandidà isany Rabeharisoa Saraha sy ny kandidà voailika, i Mahavimbina Alain. Eo koa ny kandidà Andriamorasata Solo Norbert. Samy voatsipaky ny HCC avokoa. Fitoriana tsy mitombina sy petatoko ary tsy fahaizana ny an’ireto mpanao politika sy kandidà sasany ireto nefa mikasa ny ho mpitondra.
Mazava anefa ny nambaran’ny HCC, araka ny filazana, nivoaka omaly 5 septambra fa mitombina sy mifanaraka amin’ny lalàmpanorenana io didim-panjakana fanaikana ny mpifidy io. “Hatao ny fifidianana ary tena andraikitry ny governemanta manaika ny mpifidy amin’ny didim-panjakana”, hoy ny avy etsy Ambohidahy.